Kubatana 2018.2 injini yeinjiniya yave kuwanikwa nerutsigiro rweVulkan | Linux Vakapindwa muropa
Takatotaura nezvazvo Graphics engines yemavhidhiyo emavhidhiyo pane dzakawanda zviitiko muLxA, pamusoro pezvo, isu takatsaurira zvimwe zvinyorwa zvakanangana neinjini iyo yakapa zvakawanda zvekutaura nezvazvo, uye ndiko kubatana. Muchokwadi, kana iwe wakambotamba mimwe mitambo yemavhidhiyo yeAroid, kuwedzera kune mamwe maPC uye mamwe mapuratifomu, iwe uchave waona magadzirirwo avakaitwa nekuda kweiyi graphic injini inova nebasa rekufambisa hutu hwemadhijitari ekuvaraidza edhijitari.
Zvakanaka, yatove kuwanikwa kubatana 2018.2 iyo yakaburitswa nguva pfupi yadarika. Uye zvakare, inouya nenhau dzinonakidza senge kutsigira kwayo Vulkan graphic API, chimwe chinhu chinochapa simba risina kuenzana munyika yemitambo yemavhidhiyo uye zvichave nyore kuisa parutivi OpenGL iyo inoshandiswa nhasi. Nekudaro, rutsigiro rweVulkan mune iyi nyowani vhezheni yeUbatana ichiri kuyedza, asi pasina kupokana yatove nhanho yakanaka kumberi yeshanduro dzeramangwana dzinozopedzisira dzichiishandisa zvizere.
Iyo nyowani Kubatana 2018.2 vhezheni yataura Vulkan kutsigira Zvese zviri zviviri Windows neLinux, uye kana izvo zvisina kukwana, ivo vaisanganisira anozivikanwa ekuwedzera ekuvandudza uye vakagadzirisa mamwe madudu eeshanduro dzakapfuura. Pakati pezvakanyanya kukosha ndeye rutsigiro rutsva rwekugadziriswa kwepamusoro kwePPP kukwiridzira muLinux neWindows, kune avo vanoshandisa 4k monitors vanogona kunakidzwa nemaonero akanaka. Kune zvekare zvimwe zvitsva muECS (Entity Component System) chikamu cheLinux, Mac uye Windows mune ino kesi.
Mune iyo vhezheni nyowani, ivo vanogadzira vanowanawo nhau muTexture Mipmap Kutenderera, kuvandudzwa mune iyo particle system, nyowani Pixel Yakanaka kamera ye 2D mavhidhiyo, Tsigiro yeHexagonal Tilemaps ye2D inobatsira kwazvo mukugadzirisa uye tafura yemavhidhiyo mazita, SVG importer, uye zvimwe zvakawanda zvaunogona kuwana kana ukadzora kana kuwana yako nzvimbo yepamutemo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Graphics » Kubatana 2018.2 injini yemifananidzo yave kuwanikwa nerutsigiro rweVulkan